सुबोध देवकोटाको नेतृत्व क्षमताकै कारण दुई संगठन एक भएको हो ः विजयहरि शर्मा (निवर्तमान केन्द्रीय सल्लाहकार तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि मोरङ ने.नि.क. यु. सं) — Motivate News
Posted on April 22, 2017 by motivate news
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को महाधिवेशन धेरै पटक स्थगित भइसकेको छ, तपाई केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्छ, के सातौं महाधिवेशन अबचाँही तोकिएकै समयमा होला र ?
हाम्रो संगठन प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास राख्ने संगठन हो । अब यस संगठनको तोकिएको समयमा किन महाधिवेशन हुन सकेन भन्ने जुन सवाल छ, यसमा धेरै कारणहरु छन् । पहिला तय भएको समयमा आन्तरिक तयारी नपुगेको र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएको कारण यसलाई स्थगित गरिएको हो भने फागुनमा गर्ने भनेर निक्र्यौल गरेको समयमा संगठनको आर्थिक समस्या र जुन जिल्लाले महाधिवेशन आयोजना गर्ने हो उसले नै सबै पक्षको तयारी गर्न सकिएन भनेर नै यसलाई चैतको १६ १७ र १८ मा गर्ने निर्णय गरिएको हो । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रायलमार्फत पत्र पठाएर महाधिवेशन रोक्का गरेको हो । यसमा अरु शंका सन्देश गर्ने केही औचिच्य छैन । त्यसमाथि पनि केन्द्रीय समितिको बैठकले आचारसंहिता सकिएको १५ दिनभित्र चितवनमा नै सातौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिसकेकाले अबको महाधिवेशनलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
यसरी तय गर्दै अन्त्यमा स्थगित गर्दा केही आशंका उब्जिएको कर्मचारीहरुको आरोप छ नि ?
यसमा शंका आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो हामीबीचको एकतालाई मन नपराउनेहरुले गरेको अनावश्यक हल्ला मात्र हो । स्थानीय निर्वाचनको कारणले हाम्रो संगठनको महाधिवेशन स्थगित हुनु स्वभाविक हो किनभने कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो, झन् त्यसमाथि पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई त कर्मचारीहरुको अहं भुमिका हुन्छ । हामीले चितवन जिल्लामा तय भएको सातौं महाधिवेशनमा भाग लिन आउन सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका साथीहरुलाई त एक हप्ता जति समय लाग्छ । यसले निर्वाचनलाई धेरै नै असर पर्ने कारणले मात्र यो अहिले हुन नसकेको हो यसमा अरु केही छैन । हाम्रो वर्तमान सुबोध देबकोटाको नेतृत्व क्षमतामाथि कसैले प्रश्नचिह्न उठाउने हिम्मत छैन ।
एक नम्बर प्रदेशमा रहेका १४ जिल्लाहरुमा काम गरेर देखाउन सक्ने जिल्ला नेतृत्व नै चयन भएको छ ? विगतको फुटको केही प्रभाव पनि देखियो कि ?
विगतमा नै हामी युनियन र संघबीच एकीकरण भइसकेकाले यहाँको कुनै पनि जिल्लामा यो र ऊ भन्ने भावना शुन्य छ । काम गरेर परिणाम देखाउन सक्ने कर्मचारी साथीहरु नै जिल्लाको नेतृत्वमा विजयी भएर आएका छन् । उनीहरुमा एक किसिमको ऊर्जा छ त्यसलाई उचित रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । हामीले एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर लिखित रुपमै सहमति गरेकाले अहिले हाम्रो संठगनको केन्द्रीय स्तरमा र जिल्ला तहमा यस्तो देखिएको छैन । १ नम्बर प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरुमा केहीमा निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नेतृत्वको चयन भएको हो भने केही जिल्लाहरुमा सहमति गरी निर्विरोध रुपमा नै जिल्ला कार्यसमिति चुनिएको हो ।
एक नम्बर प्रदेशमा पनि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) आधिकारिक ट्रेड युनियनमा त धेरै पछाडि नै रह्यो के तपाईहरुलाई कर्मचारीहरुले विश्वास नगरेकै हुन् ?
सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरुको हक अधिकार र उनीहरुको पेशागत सुरक्षाको लागि एउटा ट्रेड युनियन चाहिन्छ भनेर माग गर्ने नै हामीहरु हौं । जहाँसम्म आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा किन प्रथम हुन सक्नुभएन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो यो एकदमै जायज छ । पहिलोपटक नै निर्धारण गरिएको समयमा यसको निर्वाचन गरेको भए हामी अवश्यै पनि प्रथम हुने थियौं । तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले यसको सुभेच्छुक कर्मचारी संगठनलाई जिताउन बजेटको हतकण्ठा प्रयोग गरेर धाँधली गरेको त सबै कर्मचारी र आम सर्वसाधारणलाई जानकारी नै छ । कर्मचारीको तलबलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरेर निजामती कर्मचारीहरुको मनोविज्ञानलाई भ्रम पार्ने काम त्यो सरकारले गरेकै हो । हामीले यो षडयन्त्रलाई बुझेरै पनि आफूले माग गरेको विषय सम्बोधन हुनुलाई नै जितको रुपमा लिएका हौं । तत्कालीन परिस्थितिमा मत उनीहरुलाई दिए पनि उनीहरु सबै हाम्रै संगठनमा आवद्ध छन् ।
खोइ त त्यही ट्रेड युनियनले पनि केही काम गरेर देखाउन सकेको छैन किन हो ?
यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । सरकारले नै पक्षपात गरेर स्वच्छ रुपमा कर्मचारीहरुले आफ्नो नेतृत्व चयन गर्न पाएनन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सही र नेतृत्व क्षमता भएको ब्यक्तिले यहाँ आउन नपाएको कारण यसले सबैलाई समेटेर अगाडि लान नै सकेन । संगठनको अध्यक्ष पद जितेको एमालेको सुभेच्छुक संगठनका बीचमा नै कसले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्ने भन्नेमा उनीहरुबीचमा नै हात हालाहाल भयो । बल्ल बल्ल उनीहरुले नाम त दिए त्यसपछि पनि जुन अभिभारा र जिम्मेवारी लिएर गठन भयो त्यसको बारेमा कसरी काम गर्ने भन्नेर केही योजानाहरु नै तयार गर्न सकेन । सरकारसँग जुन तरिकाले सामुहिक सौदावाजी गरेर कर्मचारीहरुको अभिभावकको रुपामा रहनुपथ्र्यो त्यो गर्न सकेन । यसमा रहेका नेतृत्वहरु फरक फरक आस्था र सिद्धान्त बोकेका संगठनहरुबाट आएका हुनाले जसरी मुल केन्द्रीय नेतृत्वले सबैलाई मिलाएर लानुपर्नेमा त्यो क्षमता देखाउन नै सकेन । सारमा भन्ने हो भने निर्वाचनलाई प्रभावित पारेर मात्रै नेतृत्व हत्याएकाले यसले क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको हो ।
कर्मचारीहरुले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन हुन किन असहज मानेका हुन् ?
अहिले जतिपनि हामी निजामती कर्मचारीहरु छौं सबै नै लोकसेवाबाट छनौट भएर केन्द्रको मातहतमा रहेर काम गर्नेगरी आएका हौं । यो संघीयता नेपालमा नौलो प्रयोग हो । कर्मचारी भएपछि सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने त हुँदैन र हामीले त्यसो भनेका पनि छैनौं । हामीलाई अहिले भइरहेको सेवा सुविधा के हुने ? हाम्रो पेशागत हक र अधिकार कस्तो रहने ? स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुका यी कुराहरुको ग्यारेन्टी हुने भएमा कर्मचारी गएर काम गर्न तयार छन् । यसको लागि सरकारले हाम्रो आधिकारिक टे«ड युनियनसँग सहकार्य गरेर, कर्मचारीहरुको इच्छा अनुसार मात्र समायोजन गरिनुपर्छ । सरकारले आफूखुशी गरेमा त्यसको परिणाम राम्रो देखिदैन ।
७. नेपाल निजामती अस्पतालमा सबै कर्मचारीहरुको पहुँच भएन भन्ने सुनिन्छ नि ?
अहिले नेपालको दुर दराजमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरु बिरामी भएमा काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता छ । कमसेकम यस्तो अस्पताल प्रत्येक क्षेत्रमा हुनैपर्छ । एउटा सुदूर पश्चिमको कर्मचारी कुरुवा सहित काठमाडौं आएर उपचार गर्दा उसको एक वर्षभरिको तलबले नधान्ने स्थिति छ ।
कर्मचारीहरुलाई त सरकारले तलब वृद्धि गरिरहेको छ उनीहरु अझैपनि हाामीलाई सुविधा नै पुगेन भन्छन् के अहिले सरकारले कर्मचारीलाई दिएको सुविधाले जीवनयापन नै गर्न सकिन्न ?
हामी जनताको काम गर्न भनेर आएका हौं । लिनेले कहिल्यै पनि मलाई यतिले पुग्यो भन्दैन । सरकारले निजामती कर्मचारीहरुलाई अहिले दिएको सुविधा एकदमै अपर्याप्त छ भन्ने कुरा हामीले होइन यहाँ तेस्रो पक्षले गरेको सर्वेक्षणले पनि देखाएको छ । कर्मचारीको कम्तीमा पनि ४ जनाको परिवारलाई पाल्न सक्ने सुविधा दिनैपर्छ । अनिमात्र कर्मचारी ढुक्क भएर काममा लाग्न सक्छ । यसको लागि तलब मात्र बढाउने भन्दा पनि अन्य सामाजिक कुराहरुलाइृ पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ । कर्मचारीका छोराछोरीले निशुल्क अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ, उनीहरु सबैको स्वास्थ्य परिक्षण निशुल्क हुनुपर्छ । सरकारले काम लगाएपछि ती कर्मचारीहरुको सबै कुराको जिम्मा सरकारको हो ।
मोरङमा स्थानीय निर्वाचनको माहोल कस्तो बन्दैछ ?
अहिले हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै समयपछि हुन लागेको हो । प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अत्यावश्यक भए पनि यस बीचमा विविध कारणबस चुनाव हुन सकेन । यहाँ संगठन भएका सबै राजनीतिक दलहरुले स्थानीय उम्मेदवार छनौट गर्न सुरु गरिसकेका छन् । उनीहरु गाउँघरमा गएर मत माग्न थालिसकेको अवस्था छ । सरकारले पनि निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न तयारी गरिरहेको छ । जिल्लाहरुमा निर्वाचन कार्यालयहरुको स्थापना भइसकेको छ । जनतामा पनि एक किसिमको राजनीतिप्रति झुकाव बढेको देखिएकको छ । सारमा भन्दा यहाँ निर्वाचनको माहोल तयार भएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)मा भएको एक ब्यक्ति एक पदबारे तपाईको के धारणा छ ?
सबै साथीहरुलाई उचित जिम्मेवारी दिन सकिन्छ भन्ने उदेश्यले एक ब्यक्तिले एक पदमात्र लिने भनिएको हो ।कोही साथीहरु पद नपाएर दिक्क भएका छन् भने कोही साथीहरुलाई धेरैओटा पदमा बसेर काम गर्नु परेको छ । पदमात्रै ओगटेर त्यस अनुरुपको काम नगर्ने परिपाटीलाई कम गर्न पनि यसो गरिएको हो । छोटकरीमा भन्दा यो ब्यवस्था समग्र रुपमा ठीक छ तापनि केही जिल्लाहरुमा समस्या भएको पनि देखिएको छ । यसलाई मिलाएर संशोधन, परिमार्जन सबै गर्न सकिन्छ पनि । यो ठुलो कुरा होइन ।
कर्मचारीहरुले सुशासनमा सरकारलाई असहयोग गरे भन्ने नेताहरु आरोप लगाउँछन् किन ?
कर्मचारी भनेको सरकारले बनाएको नीति नियमको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने ब्यक्ति हो । जनताको कामलाई गुणस्तरीय किसिमले सम्पादन गर्ने काम कर्मचारीको हो । यस कुरामा हामी सँधै नै सचेत र सजग छौं । काम गर्ने शिलशिलामा केही झिना मसिना कमीहरु ह्ुन सक्छन् यो सामान्य कुरा हो यसैलाई आधार गरेर कर्मचारीहरु भ्रष्ट भए, जनताको काम गरेनन्, सुशासनमा ध्यान दिएनन् भन्नु फगत आरोप मात्रै हो । यसमा केही सत्यता छैन । हाम्रो काम गर्ने, गराउने पद्धतिमा केही कमी कमजोरीहरु छन् । यसलाई चाँही सुधार गर्नैपर्छ । यसरी आफूमात्र पानीमाथिको ओभानो बन्ने र कर्मचारीमाथि अनावश्यक लान्छना लगाउने काम कुनैपनि हालतमा उचित हैन । यसले कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने कम मात्र गर्छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को आगामी केन्द्रीय नेतृत्व कस्तो चयन भएमा यसलाई सबै कर्मचारीहरुको प्रिय संगठन बनाउन सकिन्छ ?
यस संगठनमा सुबोध देवकोटाले नेतृत्व गर्दा धेरै उपलबिधहरु भएका छन् । उहाँको नेतृत्व क्षमताकै कारणले युनियन र संघ एकीकरण भएको हो । सबैलाई मिलाएर लान सक्ने खुबी भएकोले नै उहाँको कार्यकाल अत्यन्तै सफल भएको मेरो दावी छ । अब अर्को नेतृत्व कस्तो चयन होला त भन्ने जुन प्रश्न छ यसमा त मेरो के भनाइ छ भने सकेसम्म सबैलाई मिलाएर सर्वसम्मत गर्नुपर्छ यदि त्यसो हुन नसकेमा निर्वाचन गरेर नेतृत्व छनौट गर्नुपर्छ । स्वभाविक रुपमा जसले बढी कर्मचारीहरको विश्वास जित्न सक्छ उनीहरु नै चयन हुन्छन् । गत सालको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा हामीले हारेका हैनौं र राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर हराइएको अथवा दोस्रो बनाइएको हो आगामी निर्वाचनमा हामीलाई कसैले रोकेर हराउन सक्दैन । खाँचो छ त केवल इच्छाशक्ति भएको कुशल नेतृत्वकर्ताको ।
अन्त्यमा भन्नुपर्ने केही कुरा छन् ?
एकताको सातौ महाधिवेशन गरेर संगठनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न हामी सबैले सकेको योगदान ग¥यौं, अहिले आधिकारिक टे«ड युनियनभन्दा पनि अन्य कर्मचारी संगठनहरुले कर्मचारीहरुको पक्षमा काम गर्नुपरेको बाध्यता सबै कर्मचारी साथीहरुलाई अवगत नै छ । अबको आधिकारिक निर्वाचनमा हामीलाई प्रथम स्थान दिएर काम गरेर देखाउने अवसर दिनुहोस् भन्ने मेरो सबैमा आग्रह छ । नेपा निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)मा काम गरेर परिणाम दिनसक्ने नेतृत्वहरु धेरै छन् ।